Olympus TG-6 review - MiteLar
စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးရေစိုခံကင်မရာOlympus Tough TG-6 သည်ကုမ္ပဏီ၏ဆဌမမျိုးဆက်ပရီမီယံရေအောက်ကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 12 Megapixel အာရုံခံကိရိယာ၊ 4X optical zoom မှန်ဘီလူး၊ မြောက်မြားစွာသောအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ခိုင်ခံ့သောကာကွယ်မှုပုံစံ တို့ပါ၀င်သည်။
-12MP, 1 / 2.3 “BSI-CMOS အာရုံခံကိရိယာ
-25-100mm နှင့်ညီသော F2.0-4.9 တည်ငြိမ်သောမှန်ဘီလူး
-ရေစိုခံနိုင်မှုသည် ၁၅ မီတာ (၄၅ ပေ)၊ ၂.၁ မီတာမှ ၇. လက်မမှဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိပြင်းထန်သောဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ၂၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိခဲနိုင်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
-၃ လက်မ၊ ၁.၀၄ မီလီမီတာအစက်အပြောက် (မထိပါ)
-1cm (0.4 “) နိမ့်ဆုံးအာရုံစိုက်အကွာအဝေး
-20 fps ပစ်ခတ်မှုကွဲ
-Pro Capture မုဒ်သည်သင့်တော်သောအချိန်ကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်ရှပ်တာလွှတ်ခြင်းနှိပ်ပြီးသည့်နောက်နှင့်အပြီးဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းသည်
-4K / 30p ဗီဒီယို
-built-in GPS, altimeter, သံလိုက်အိမ်မြှောင်, thermometer နှင့် accelerometer
-optional ကိုပြောင်းလဲခြင်းမှန်ဘီလူးနှင့် flash ဆက်စပ်ပစ္စည်း
-TG-6 ကိုအနက်ရောင်နှင့်အနီရောင်များ ထုတ်လုပ်ထားပြီးဒေါ်လာ ၃၇၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
TG-6 သည်အိတ်ဆောင်နှင့်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုင်ဆောင်သင့်သည့် သူများမှာ
-စမတ်ဖုန်းနှင့်မတူဘဲ ပြုတ်ကျသွားရင် သို့မဟုတ် ရေစိုသွားရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်တာ ကို လိုချင်တဲ့ Daily shoorter များ
-ရေအောက် နက်နက်ထဲသွားပြီး ကင်မရာမှအလင်းအမှောင်ကိုအသုံးပြုလိုသောရေအောက်ဓာတ်ပုံဆရာများ
-တည်နေရာနှင့်အမြင့်ကဲ့သို့သောအရာများကို၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများ၏ metadata တွင်ထည့်သွင်းလိုသော တောင်တက်သမားများ
Olympus Tough TG-6 သည်ကုမ္ပဏီ၏ဆဌမမျိုးဆက်ပရီမီယံရေအောက်ကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 12 Megapixel အာရုံခံကိရိယာ၊ 4X optical zoom မှန်ဘီလူး၊ မြောက်မြားစွာသောအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ခိုင်ခံ့သောကာကွယ်မှုပုံစံ တို့ပါ၀င်သည်။
ပထမအုပ်စုတွင်ရှိသူများအတွက် TG-6 ၏ auto mode သည်အခြေအနေတိုင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ numerous scene modes ကိုလဲ စနစ်တကျစီစဉ်ထားပါတယ်။
ရေအောက်သွားမလား? Mode ပေါ်ရှိ ‘fish’ နေရာကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ထိုနေရာတွင်သင်နှင့်အခြေအနေနှင့်လိုက်ဖက်သောရွေးချယ်မှုငါးခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်မှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကလွှမ်းမိုးခံရခြင်းကြောင့် Olympus သည်ပိုမိုဆန်းသစ်စွာ အသုံးပြုချင်သူများအတွက် ၎င်း၏ menu စနစ်၏ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းကိုမဖန်တီးခဲ့ခြင်းက ၀မ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်အားထက်သန်သူများအတွက် TG-6 သည် ကိုယ်ပိုင် ထိန်းချုပ်မှုအချို့ပေးထားသည်။ သို့သော်အဆင့်မြင့်ကင်မရာပေါ်တွင်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ပါ။ သင် aperture ကိုချိန်ညှိနိုင်သော်လည်းတစ်ကြိမ်တွင်ရွေးချယ်မှုသုံးခုသာရှိသည်။ ဒါကြောင့်လည်းကင်မရာမှာ shutter priority ဒါမှမဟုတ် manual exposure modes တွေမရှိဘူး။ သတိပြုသင့်သည်မှာသင်သည် auto mode တွင် Exposure လျော်ကြေးကိုချိန် ညှိ၍ မရနိုင်သောကြောင့် program သို့မဟုတ် aperture Priority သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
Olympus ကင်မရာသည် ၁၅ မီတာ (ပေ ၅၀) ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော၊ wide-angle and fisheye ပြောင်းလဲခြင်းမှန်ဘီလူးများ၊ wirelessly fire Olympus’s flashes ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုပေးထားသည်။တောင်တက်သမားများနှင့်အခြားစွန့်စားသူများသည်ကင်မရာ၏အာရုံခံကိရိယာနှင့်ခြေရာခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို အသုံးချ၍ ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါသူတို့ဘယ်သွားသွားသည်ကိုအတိအကျသိနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကိရိယာများတွင် GPS၊ altimeter / depth gauge, compass, accelerometer နှင့် thermometer ပါ ၀ င်သည် (ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သောကင်မရာနှင့်မနီးစပ်သော်လည်းအခြားအာရုံခံကိရိယာများမှာမူကောင်းမွန်သည်) သင်ထွက်ပြီးသောအခါ ‘info’ ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကင်မရာရိုက်ကူးသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြသလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် TG-6 ၏အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၁ စင်တီမီတာ (၀.၄ လက်မ) အကွာအဝေးကိုရိုက်ကူးရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကဒစ်ဂျစ်တယ်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းစနစ်သည်သင့်အားရုပ်ပုံအရည်အသွေးကျဆင်းစေသော်လည်းလေးဆပိုများစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ macro ဓာတ်ပုံ flexible ဖြစ်အောင် ring light and flash diffuser ကို Olympus ကရောင်းချပေးထားပါသည်။
Sai San Seng2020-09-17T06:56:34+00:00